Tacliinta Ma Qabiil baa Qeybiya mase Qaranka!!!! | Codka Shacabka Soomaaliyeed
Tacliinta Ma Qabiil baa Qeybiya mase Qaranka!!!!
09/10/2011 — Codka Shacabka Soomaaliyeed
In kasta oo baaba’ dalka Soomaaliyeed uu salka ku hayo sad bursi iyo is dhinac orod ay qolo kastaaba ay rabto iney iyadu noqoto midda hesha saamiga ugu weyn, ayaad hadana moodaa inaan weli la fahmin dhibka uu sad bursigu u keenay ummadda Soomaaliyeed meel kasta oo ay caalamka uga nooshahay.
Waxaa la xasuustaa qaababkii ay u dhaqmi jireen dowladihii dalka soo maray intii uusan dhicin halaaga hadda ummadda heysta, kuwaasoo waxa ay sameyn jireen ay keentay in qolo kastaaba ku hamiso iney sidoodii oo kale noqdaan oo iyagu helaan waxa ay heli jireen kuwii dowladda markaas ahaa. Taasna waxay na dhaxalsiisay in la waayo qolo wax naqata welina waa la fahmi la’ yahay inay qolo wax naqato ay ka muhiimsan tahay in qaran uu wax noqdo, waana midaas midda keentay xarig jiidka aan dhamaadka laheyn oo ay cid walba uga faa’iideysato sida ay danteedu tahay.
Akhtistow waxaa laga yaabaa inaad is leedahay bal maxuu ninkani soo wadaa oo uu intaas oo araar ah uu u sameynayaa. Marka laga soo bilaabo markii ay gobolada waqooyi ku dhawaaqeen iney gooni isaga taageen dalka intiisa kale, waxaa soo ifbaxayey gobolo iyo magaalooyin magacyo loo bixiyay oo la lee yahay waxa ay lee yihiin maamul khaas ah oo marka aad aad ugu fiirsato aad ka dhedhemin karto iney yihiin qabiil doonaya inuu qabiilo kale ka sad bursado oo aanan isagu rabin inuu dadka kale wax la qeybsado. Tii maanta waxa ay soo gaartay in xataa waxbarashadii ay noqoto mid la kala sad bursado oo la siiyo oo kaliya qolada markaas magaca la baxday oo iyagu leh innaga ayaa maamulna dadka kale ee magaalooyinkaas ku nool.
Waxaa wax laga naxo ah inaan weli wax cashar ah aanan laga baran labaatankii sano oo aan baaba’a iyo dhibaatada ku soo jirnay oo ay weli jiraan kuwo aaminsan in ay iyagu yihiin kuwa mudan oo mar kasta raba iney ka sad bursadaan dadka intiisa kale.
Waxaa taas ka sii daran, ardayda la lee yahay waxbaa la barayaa ee lagu soo xulay qaabkaas sidey u noqon karaan kuwo wadaniyiin ah oo ka fikira DAL iyo DAD haddii qaabkii markii horayba ay wax ku heleen uu ahaa midkaas sadbursiga iyo eexda ku dhisan???
waxaad u maleysaa inaan su’aalahaas aanan la isweydiin balse waa kuwo u baahan inaan jawaab u helno haddii kale waxaa uu xeerku u ekaanayaa xeerkii duur joogta oo uu midka xooga badan ama qayaanoolaha ahi uu noolaado marka ay inta kale baaba’aan.
Waxaa laga yaabaa in aysan dad badan wax qiima ah aysan u sameyneynin qeybsiga kuraasta waxbarasho ee laga helay dalka Turkiga oo dad badan ayaa waxa ay ku doodayaan, in arday kasta oo baxa uu yahay arday Soomaaliyeed oo uu dalka uu kula soo noqon doono aqoon iyo waayo aragnimo dheeri ah,(waaba haddii ay ku soo noqdaane!!!) laakiin anigu waxaan qabaa in loo baahan yahay in sidaas si ka duwan wax loo maamulo haddii kale waxaa dhalanaya in qof kastaaba uu aragtidiisa ku koobo heer qoys iyo jufo hoose oo uu fahmi waayo in intaas ka badan sidaasna lagu waayo QARANKII SOOMAALIYEED.
Akhristow haddii aadan horey si fiican aadan ugu fiirsan arinta qeybsiga waxbarashada dalka Turkiga oo loo kala geybiyay qaabka maamul ku sheega meelaha laga sameystay oo qabiilka iyo sad bursiga ku dhisan runtii dib ugu noqo, fiirina waxa ay keeni doonto sanadaha soo socda iyo weliba sida ay u noqon doonto wax mar kasta lagu xisaabtamo loona qeybiyo sida hadda loo qeybiyay.
Runtii waa wax laga naxo in wax kasta lagu qeybiyo qaabaka naxdinta leh oo ay qumeystaha iyo qumeysi u adeeguhu ay uga tala galeen iney meesha uga saaraan Qarankii Soomaaliyeed, haddii aynu aqbalno oo aan wax ka dhihi weynana, tani waxa ay noqoneysaa guul u soo hoyatay qolooyinka gumeystaha u shaqeeya oo aan iyagu garan wax ka dheer waxa jeebkooda iyo calooshooda gala.
In kasta oo ay tusaalooyinka wax wadaaga foosha xun aysan ku ekeen xagga waxbarshada, balse arinta waxbarashadu waa ay nagu cusub tahay, waxaase wax lala yaabo ah in dhowlad kuwo sheeganaayo ay sidaas raali ka noqdaan, oo ay weli awood u yeelan waayeen iney yiraahdaan tacliinta qaranka ayaa qeybiya ee qoys ma qeybiyo, waxaadse moodaa in dhowladda meesha joogta ay ka awood badan yihiin maamul ku sheegyada heybta ku dhisan oo iyaga dantooda u arka inaan weligeed QARAN la helin.
Waxaan hubaa inaan magaceyga aanan maamul ku sheeg aanan lagu sameynaynin inta aan noolahay balse waxaan u soo jeedinayaa dhamaan dhalinta Soomaaliyeed ineysan dhayalsanin midida ku socota Dadka iyo Dalka Soomaaliyeed oo maalinba meel loogajaryao iyada oo loo adeegsanayo mid uu u heysto inuu walaalkiis yahay oo uu wado dantiisa. Waxaana lagama maarmaan ah ineynu fahanno inaan danta qoyska aysan ku jirin iney sameystaan maamul ku sheeg uu ku waxyeeleeyo kuna dhaco dadka kula nool magaalooyinka ay degen yihiin , waxeyse ku jirtaa in uu qoys walbaaba uu ku dadaalo sidii walaakiisa dereska la ah uu u heli lahaa waxa uu xaqqa u lee yahay taasna waxa keeni kara maamul aanan aheyn midka lacagaha ay ku dhiibaayaan gumeysiga dadban ee u dhisan kala qoqobka ummadda Soomaaliyeed.
In kasta oo laga yaabo in dhalinta heshay waxbarashadaan, ay qaar badan oo ka mudan ay waayeen, hadana dhalintani iyagu denbiga ma laha, waxaana kula dardaarmayaa iney ku dadaalaan sidii ay uga faa’iideysan lahaayeen fursadaan qaaliga ah, oo ay u dhameysan lahaayeen waxbarshada ay fursadda u heleen ugana fa’iideyn lahaayeen waxey baran doonaan dhamaan ummadda Soomaaliyeed. Waana muhiim iney ogaagaad in ay fusradaan ku heleen magaca Soomaaliyeed oo aysan ku helin qoys gooni ah oo ay iyagu ka dhasheed walow laga yaabo kii ay isku qolada ahaayeen inuu iyaga ka soo gatay kursigaan, sidii wax uu isagu lee yahay. Waxey naqataba waxaan ardayda lee yahay waa laga bixi doonaa sida aynu hadda nahay ee noqda kuwii wax u soo barta DALKOODA iyo DADKOODA, kana saara dhibaatada ay maanta ku jiraan.
« Madax Dalkaada dayuurad ku timid Dal kuuma Dhisayaan.
Maxaanu ka baran karnaa mudaaharaadyada caalamka ku baahaya, waxi keenayna ma ka feejignaan karnaa? »